Maamulka Jubbaland oo fasaxay qaxooti ku xayirnaa Dhoobley – STAR FM SOMALIA
Maamulka Jubbaland oo fasaxay qaxooti ku xayirnaa Dhoobley
Maamulka Jubbaland ayaa fasaxay qaxooti ku xayirnaa degmada Dhoobley ee Gobolka Jubada Hoose, kadib markii dhowaan ay ka soo laabteen xerada Qaxootiga Dhadhaab.
Qaxootigan ayaa saddexdi maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa degmada Dhoobley, kadib markii Maamulka Jubbaland uu hakiyay qorshihii dib u soo celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugnaa Xerada Dhadhaab.
Maamulka Jubbaland ayaa ku doodayay in Hey’adaha gargaarka aysan wax dib u dejin ah u sameyn, isla markaana dadka qaxootiga ee la soo celinayo aan siinin adeegii ay u baahnaayeen ee dib u dejinta.
Wasiirka Arrmaha Gudaha Jubbaland Maxamed Warsame Darwiish ayaa sheegay in go’aanka ay dib ugu fasaxeen qaxootiga uu ka dambeeyay markii ay shalay Kismaayo ku kulmeen wafdi ka socday UNHCR.
Mr Darwiish ayaa sheegay in saddex qodobo ay isku afgarteen wafdigii ka socday Hey’adda UNHCR, isagoo xusay in ugu horeyn ay aqbaleen in 1,100 qaxooti ka yimid Xerada Dhadhaab ay fasaxeen inay safarkooda sii wataan.
“Waxaa ku heshiinay in qaxootigii 1,100 ruux ahaa ee aan ku hakinay Dhoobley in aan u fasaxno goobaha ay ku socdeen oo ah deegaanada Jubbaland iyo Koofur Galbeed, Jubbaland, markii hore waxaa u xayirnay in aanay jirin goob u diyaarsadan, waxaa kaloo isku afgaranay UNHCR in 7 cisho gudahood kulan deg deg ah la isugu yeero Guddigii saddex geesoodka ahaa”ayuu yiri Maxamed Warsame Darwiish oo la hadlayay Idaacada VOA.
Sidoo kale waxaa uu sheegay inay isku afgarteen UNHCR in dadka qaxootiga ee la celinayo in marka hore mustaqbalkooda laga fikiro, isla markaana aan la soo rarin inta go’aano ka soo baxayaan shirka saddex geesoodka.
Guddiga saddex geesoodka oo ka kooban dowladda Federaalka, Kenya iyo UNHCR ayaa isku afgartay in qaxootiga ku jira Xerada Dhadhaab aan si qasab ah lagu celin, iyadoo qaxootigii diyaar u ah in dib loogu celinayo deegaanadooda
Shirka Maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe oo maanta dib uga furmaya Jowhar
Kulan Wada Tashi Bulshada Rayidka ah oo Lagu Soo Gabagabeeyay Cadaado